'' Walitti bu'iinsa Oromiyaafi Somaaleetiif maddi daldala jimaafi daddabarsu maallaqaati'' - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdeen Oromiyaa fi Somaale jidduutti umamee ture ka'umsi isaa rakkoo daangaa miti jedhaniiru, muummeen ministiraa Obbo H/Maariyaam Dasaalanyi.
Obbo Haayilamaariyaam har'a wayita gaaffilee miseensoota mana mare bakka bu'oota ummataatiif deebii kennaniin, waldhabdeen Oromiyaa fi Somaalee gidduutti dhalate ture maddisaa rakkoo daangaa ta'u akka hin amanne har'a ganama dubbataniiru.
''Rakkoon ijoo waldhabdee naannoolee Oromiyaa fi Somaalee, du'aatii namoonni dhibbaatamaan lakkaa'amiifi kanneen kuma dhibba hedduu ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqaa'aniif sababa ta'eef maddisaa dhimma 'kiraa sassaabdummaa' ti'' jedhaniir.
''Kontiroobaandii dabalatee, daldalli Jimaa ol-aantummaan to'achuuf wal morkiin taasifamuu fi daddabarsuu maallaqa seeraan alaa, naannoo kanneeniitti taasifamuutu waldhabdeen bifa waldhabdee sabaa akka qabaatu taasise.''
Qaamooleen faayidaa kana baran yoo waldhabdee uuman malee, waan hojjechuu danda'an waan itti hin fakkaanneef jecha waldhabdee kana uumanii jechuun dubbataniiru.
Rakkoo dhalate to'achuuf gaheen raayyaa ittisa biyyaa kan dinqisafatan Obbo Haayilamaariyaam, miseensonni poolisii addaa uummata irratti miidhaa qaqabsiisanis seeraan ni gaafatamu jedhaniiru.
Haa ta'u malee, humna addaa poolisii naannoo Somaalee kanneen dhaabbilee mirga namoomaa hedduun sarbama mirgaa dhaqqabsiisuufi haala naannoolee lamaa jiduu turee caalaa arbeessuu isaanitiin komatan ture garuu osoo hin qeeqiin bira darban.
Humni addaa naannoo Somaalee maaliif hin diigamu jedhame gaaffii miseensota mana mareetiin gaafatameef yoo deebiisan, ''maqaan humni addaa jedhu maaliif pooliisif kenname jedhu dogongora'' jedhan.
''Poolisoonni idilees jedhamee humna addaa lamaanuu keessatti hirmaataniiru. Rakkoo kan jjiru ilaalcha irra malee waan humna addaa jedhamaniif miti,'' jechuun deebiisan.
Kana malees, dhimma aangoo gad-lakkisuu aangawoota mootummaa olaanoo ilaalchisuunis, Obbo Barakat kana duras gaaffii walfakkaattaaa gaafachaa turuu isaaniifi gaaffiin isaanii fudhatama argachu isaa himaniiru.
Kan Obbo Abbaa Duulaan garuu yeroo jalqabaatiif gaafachuu isaanii himuun, gaaffiiwwan aangawaoota lamaanii walfaana dhiyaachuun tasa kan mudatedha jedhaniiru. Baramuus qaba jechuun himaniiru.
Walga'ii har'aa irratti Obbo Abbaa Duulaan kan hinargamne yoo ta'u, waliin marii taasisuun eegalamu isaa obbo Haayilamaariyaam himaniiru.
''Mariin kuni hin xumuramne. Aangoo irra jiran irratti osoo itti fufanii nu gammachiisa.''
Gama akkaataa miidiyaaleen haala waldhabdee itti gabaasaa jiran kan qeeqan yoo ta'u, ittigaafatamummaan akka hojjetaniif dhaamaniiru.
Gaheen mootummaa itti aanu ammoo, miidiyaa hawaasaa gamaggamuudha kan jedhan mummeen ministiraa obbo Haayilamaariyaam dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi kaan irratti gaaffiwwan gaafataman deebisaniiru.